Ku Qaadashada Boggaaga Caalamiga ah Raadin | Martech Zone
Ku Qaadashada Goobtaada Caalamiga ah Raadin
Arbacada, Agoosto 10, 2011 Khamiista, Oktoobar 27, 2011 Douglas Karr
Waxaan la kulanay tartan iyo madadaalo la shaqeynta dhowr macmiil oo ku saabsan talooyinka lagu qaado boggooda caalami ah markay tahay SEO. Waxaan sidoo kale leenahay macaamiil kale oo aan dooneynin inay qiimeeyaan heer caalami laakiin helaan tiro ka mid ah taraafikada caalamiga ah. Helitaanka mashiinka raadinta sida Google oo kale si aad u fahamto ujeeddadaada dejinta ama caalamiyeynta uma sahlana sida dejinta waddanka bartilmaameedka Webmasters-ka… waxay u baahan tahay shaqo badan.
Faafi waa la-taliye caalami ah oo SEO ah oo aan u kireysannay inuu la shaqeeyo mid ka mid ah macaamiisheenna waxayna na siiyeen talooyin aad u fiican oo aan awoodnay inaan ugu beddelno natiijooyinka 3 ka mid ah macaamiisheenna. Distilled dhawaan sameeyey a bandhigga qaar ka mid ah falanqaynta xogta qaadashada bartaada caalamiga ah.
Qaar ka mid ah natiijooyinka:
Heerarka heerka sare ee caalamiga ah u shaqee si ka fiican subdomains ama subfolder. Marka, tusaale ahaan, haddii aad rabto inaad joogtid Talyaaniga, ka hel boggaaga cinwaankaaga .it tld.
Tarjumaada luuqada makiinada waa aan waxtar lahayn. Kaliya weydii mid ka mid ah macaamiishayda isticmaalay ereyga xubin oo leh tarjumaad mashiin ruush ah… waxay heshay waxoogaa yar oo cududaar iyo raali gelin badan.
Lahaanshaha cinwaanada deegaanka (xafiisyada durugsan) iyo lambarrada taleefannada goobta shaqadu ka socoto.
Lahaanshaha xiriiriyeyaasha dibedda ka baxa goobta asal ahaan waxtar ma leh.
Lahaanshaha xiriiriyeyaasha gudaha ee gudaha goobta ma aha mid muhiim ah midkoodna links iskuxirayaasha soo galaya ee maamulka ka sarreeya ayaa ka wanaagsan kuwa maxalliga ah.
View more bandhigyada ka Hannah Smith. Xogta ka soo baxda gorfeynta 'Distilled' waa la soo bandhigi doonaa dhowaan.
Tags: Cabir CP
Douglas Karr Wednesday, August 10, 2011 Thursday, October 27, 2011
Horumarku Qayb Ma Ka Yahay Miisaaniyaddaada Suuqgeynta?
Xeerarka Warbaahinta Bulshada ee Goobta Shaqada